मधेस आन्दोलन आज जुन ढङ्गले असफल भयो, त्यसका कारण के–के हुन् र समस्या कहाँ देख्नुभएको छ ?
मधेसमा जसरी छ महिनासम्म आन्दोलन जारी रह्यो । त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उत्कर्ष थियो । राज्यले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै त्यो राजनीतिक कोर्सलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको भए राम्रो हुने थियो तर दुर्भाग्य त्यसो भएन । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर विनानिष्कर्ष टुङ्गिनुको एउटा प्रमुख कारण राज्यको उदासीनता, गैरजिम्मेवारीपन हो भने अर्को आन्दोलनको नेतृत्वले जसरी रणनीति अख्तियार गर्नुपथ्र्यो । त्यसमा कहीँ न कहीँ कमजोरी भए । दलगत स्वार्थ, नेतृत्वको होडबाजी र टकरावले आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो । अर्को कुरा मधेसमा आन्दोलन भइरहँदा जसरी समान उत्पीडनमा परेका पहाडका जनतालाई पनि समेट्दै त्यहाँका जनताको विश्वास जित्नुपथ्र्यो । तर त्यसविपरीतका अभिव्यक्तिहरु आए, त्यसले मधेसइतरका जनतालाई आन्दोलनप्रति वितृष्णा फैलाउने काम ग¥यो ।
मधेसको चिन्तनधारा र काठमाडौं मूलधारको चिन्तनधारामा कहाँनेर भिन्नता छ ?
पहिलो त काठमाडौंले मधेसलाई भारतीय संस्थापनसँग जोडेर हेर्ने गर्छ । आउने दिनहरुमा मधेसीहरु बलियो भए भने भारतीयहरुको स्वार्थमा काम गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । अर्को यहाँ खाईपाई आएकाहरु मधेसीहरु बलियो भए भने हाम्रो स्वार्थमा धक्का लाग्छ भन्ने चिन्तनबाट आएका छन् । साथै लामो समयको एतिहासिक कारणले पनि यहाँ के काम गरेको छ भने मधेसी मुलका नेपालीलाई नेपाली नै नमान्ने । इन्डियन आइडलमा प्रशान्त तामाङ सहभागी हुँदा उसलाई भोट हाल्न काठमाडौँमा क्याम्पेन चलाइन्छ । जबकि ऊ भारतीय पुलिसको हवलदार हो । भनेपछि यो एउटा चिन्तनधारा हो । जस्तै भारतको गोरखाल्यान्डको कुरा आउँदा यहाँ सद्भाव र समर्थन व्यक्त गरिन्छ तर मधेसमा अधिकारको आन्दोलन चल्दा त्यसमा कुनै सरोकार राख्दैनन् । नेपाल देश त भयो तर त्यस चौघेराका मानिसहरुलाई कहिलै पनि नेपाली बन्न दिइएन अथवा नेपाली बनाउन प्रयास गरिएन ।